DAAWO: Maxay isku afgarteen Rooble, 2-da D/Gobaleed & Midowga Musharaxiinta?
April 29, 2021 Farah Abdulkadir Mohamed 2
MUQDISHO(P-TIMES) – Macluumaad dheeraad ah ayaa naga soo garay wada hadal gaar ah oo ay yeesheen Raysalwasaaraha Soomaaliya, Madaxda 2da dawlad gobaled ee Hirshabeelle, Galmudug & Midowga Musharaxiinta, kaas oo diiradda lagu saaray 5 qodob oo ku wajahan arrimaha kataagan gudaha Siyaasadda ee Soomaaliya.
Qar kamid ah ka qeybgalayaasha kulanka ayaa noo xaqiijiyey in wadar ahaan dhinacyadu aad iskugu soo dhawadeen, marka loo eego halkii ay kala joogeen bilihii u dambeeyey, waxaana si gaar ah diiradda loo saaray tubta doorashooyinka, Amniga & qodobada lagu kala aragti duwan yahay sidii loo riixi lahaa.
Madaxda Galmudug & Hirshabeelle ayaa bilowgiba dooda ku furay in loo baahan yahay in lafuliyo dhammaan is afgaradkii la xariiray go’aankooda ee ahaa in la dajiyo xaaladda Caasumada, jidadka oo dhan laga qaado ciidamada, sidaas oo kalena la abuuro hanaan wada hadal iyo looga hadli karro doorasho ,iyadoo diiradda la saray dajinta Shacabka iyo in laga dheerado Ifafalaha coladda abuuraya.
Dood dheer oo ay dhinacyadu si hoose ugu wada hadleen lana xariirtay Saami qeybsiga ay kasoo wada jeedaan ayaa socotay ku dhawaad Hal saac iyo 40 daqiiqo, tas oo ay si hoose uga wada hadlayeen dhinacyada oo kasoo wada jeeda Hal saami qeybsi oo kamid ah nidaamka 4.5, si kalena ay si dhaw u tabanayso xaaladda Muqdisho.
Darafyadu, waxay isku racsanaayeen in ay ahayd talaabo wanagaan go’aanka dagaalka looga baaqsaday, waxayna Mucaaradku uga mahadceliyen Raysalwasaare Rooble & Madaxda 2da Dawlad gobaleed go’aanka ay gareen oo ay sheegeen in ay uga hortageen qorshe kale oo diyaarsanaa, kaas oo ay sheegeen in gudaha Villa Soomaaliya uu kasocday.
Ka sokow qodobadan 4ta ah ee ay isku afgarteen dhinacyadu, haddana waxaa soo baxaya macluumad cadeynaya in uu jiro Isfaham guud oo dhexmaray Raysalwasaaraha, 5ta dawlad gobaleed iyo Mucaaradka, ayna u arkayaan xubnaha musharaxiintu in ay tahay in dhinacyadaas awood lagaliyo si looga shaqeeyo qabsoomida doorashada oo ay dhinacyadu ku wada kalsoon yihiin.
Nin u hadlay oo hadlay oo wasiir ah,baa u muuqday,nin weli taagaan mowqifkii burburiyey shirkii kal hore lago qabtay ( afasyoone) ee magaakada Mogadisho oo sab u ahaayeen Deni iyo Madoobe.
Dowlada federaalka iyo waxa ay u taagantagay in dorasho la aado si dhaqsiya ah,shacabka Soomaaliyeed badankood waa ay taageereen arintaasi.
Madaxwaynaha Soomaaliya wudbadiisii ayuu ku sheegay mowqifka cad ee ku aadan arintaasi,raiisal wasaaraha isba doorwayn ayuu ka qaatay nabad ku soo dabaaluda.
Maleeshiyaad ka taageera musharixiinta Mogadisho waa in ay joojiyaan dagaalada iyo rabshadaha.
Deni,Madoobe ha joojiyaan jid iyo jiho la’aanta iyo jahawareerka ay ku xagal daacinayaan heshius lagaaro.Cabdiraxmaan Cabdishakuur,waxa uu ogyahay in uusan runtii lahayn taageero, sidaa daraadeed waxa uu ka midyahay koox maalin walba,u taagan fidin warar been iyo kicin dhisan.
Musharixiinta Mogadisho shacabka Soomaaliyeed waxa ay yihiin waa ay yaqaanaan,xaga musumaasuqa hadda waxay ba noqdeen madaxa maleeshiyaad beeleed.
Abdullahi Ilmi, waxaad u hadashaa sidii nin ka tirsan Xertii Shiikh Boon ama waxa afka qalaad lagu yiraahdo (member of a cult), taas oo macnaheedu yahay in adiga iyo xerta la baxday N&N aad ku digridaan waligiina Farmaajo oo kaligiis sax yahay.
Abdullahi, ma waxaa jid iyo jiho diid ah Farmaajo oo inta jid kasta ka soo xirmay markaas qardajeexay oo markuu meelna gaariwaayey hada sheegay inuu soo laabanayo isago kaligiis ah oo cidla looga dhawaaqay mise Deni iyo Axmed Madoobe oo cid walba u soo laabay?
Xertu ma garan karto, oo waxay u qabaan in waligu quluubtooda daalacanayo.
War ninkaan waalan ka har haddii aad wax isku falayso.